Home News XOG:Madaxweyne farmaajo oo ku wajahan dalka Qatar si culeeys loo saaro kheeyre...
XOG:Madaxweyne farmaajo oo ku wajahan dalka Qatar si culeeys loo saaro kheeyre iyo imaaraatka
Xog gaar ah oo aan helnay ayaa sheegeysa in dhawaan Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo safar ku aadi doono Dalka Qadar .
Safarka Madaxweyne Farmaajo oo ku aadayo dalka Qadar ayaa la sheegaya in ujeedadiisa ay tahay sidii loo qal qalin galin lahaa loona fashilin lahaa hishiiska ay wada gaareyn Maamulka Soomaliland iyo Dowlada Imaaratka.
Sidookale Farmaajo ayaa doonaya inoo fashiliyo Ra’iisul Wasaare Xasan cali Khayre oo dhawaan safar maalmo qaatay ku tagay Imaaratka,halkaasina kula so saxiixday hishiisyo dhinacyo badan ah qaarkoodna oo wadaagin Madaxweyne Farmaaajo.
Madaxweyne Maxamed cabdullhahi ayaa ujeedda ugu weyn ee u tagayo Qadar waxaa ay tahay sidii culeys balaaran loo saari laha Ra’iisul Wasaare Khayre iyo Dowlada Imaaratka kuwaasi oo xiriir hoose ka dhaxeeyo.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa inta oo ku sugnaa Imaaratka wxaa oo hishiis ka dhan ah midnimada Soomaaliya usoo saxiixay Imaaratka,waxaana intoo oo ku sugnaa Imaaratka la qeyb saday Dekada Berbara.
Safarkan oo farmaajo ku aadayo Qadar ayaa dhabar jab iyo fashil ku noqon doona Ra’iisul Wasaare Khayre oo maalin nimadii jimcadii ku soo laabtay Dalka kadib safar uu ku tagay Imaaratka.
Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa marka oo Dalka ku soo laabtay shir uu qabtay ku sheegay inuusan waxba kala socon hishiiska ay wada gaareyn shirkada Dp-world, Dowlada Itoobiya Iyo Maamulka Somalilnad kaasi oo lagu qeyb saady Dekeda Berbara.
Ra’iisli Wasaare Khayre ayaa la rumaysan yahay inoo waxbadan ka ogaa hishiiskaasi safarkii uu ku tagay Imaaratkana oo lug kulahaa hishiiska Berbara.